अनन्त रोकिएन आँसुको भेल – Mero Pradesh TV
बुधबार ढल्केवरमा दिलिप महतोलाई न्याय माग्दै प्रदर्शन जे देखियो
दिलिप महतोलाई न्याय माग्दै प्रदर्शन हुँदै थियो । प्रदर्शनमा दिलिपको बहिनी लक्ष्मी र सँगमलगायत सबै दिदीबहिनी उपस्थित थिए । प्रदर्शनका सहभागिहरुले दिलिप हत्याको बिरोधमा जसो–जसो नारा लगाउन सुरु गरे उपस्थित सबै दिदी बहिनी भावह्विल भएर भक्कानिएर रुन थाले । आँखाबाट तप–तप आँसु झार्दै भक्कानिएको देखेर प्रदर्शनका अन्य सहभागि सबैको आँखा रसायो ।
बिरोध प्रदर्शनको सुरवातदेखि कोणसभा सम्पन्न हुँदासम्म उनीहरुको आँखाबाट आँसुका भेल रोकिएन । प्रदर्शनकारीले जसरी ‘दिलिप महतोलाई न्याय दे’, ‘दिलिप महतोलाई प्रथम राष्ट्रिय पर्यावरण शहिद घोषणा गर’, ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर’, ‘दोषीलाई कडा कारबाही गर’ जस्ता नारा लगाउँथे ति दिदीबहिनीको चित्कारको स्वर झन् ठुलो हुन्थ्यो । भक्कानो नफुटोस् पनि कसरी ओत लाग्ने छानो जुन उजाड भएको छ । अभिभावक भएर ममता गर्ने दाइ जुन गुमेको छ ।
प्रदर्शनमै उनीहरुलाई चुप लगाउनेहरुको कमी थिएन् । न्यायको पक्ष आवाज बुलन्द गर्दै सहभागि भएका महिला र उनका दौतरीहरुले आँखाका आँसु पुछिदिन्थे । तर जता–जता ¥याली जान्थ्यो त्यही बाटोमा आफ्नै आँसु आफ्नै खुट्टाले नाघेर हिड्नुपर्ने बाध्यता बाहेक अरु के नै गर्न सक्थ्यो र ?
¥यालीपछि कोणसभामा दिलिपको बहिनी सँगमले भावुक हुँदै भनिन् ‘हामीलाई धेरै माया गर्ने घरको खम्बा हुनुहुन्थ्यो दाई । मेरो दाइलाई हत्याराहरुले क्रुरुतापूर्वक हत्या गरिदियो । अब हामीहरुको साहारा कोही छैन् । त्यति मात्र होइन हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो– ‘तिमीहरु चिन्ता नगर’, मेरो बुवा दमको रोगी हुनुहुन्छ । हामी ६ जना दिदी बहिनी र दुइ दाजुभाइ गरी बुवाआमा हजुरबुवा हजुरआमा जम्मा १२ जना परिवार सदस्य थियौं । तर पापीहरुले एकजना सदस्य घटाइदियो । दाइले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो– तिमीहरु राम्रोसँग पढ् । तिमीहरुको लागि जे गर्नुपर्छ म गर्छु भन्दाखेरि पनि आँसुको भेल निरन्तर बगिरहयो ।
दिलिप महतो जसतको झण्डै एक महिनाअघि टिपरले किचेर हत्या गरियो । धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिका वडा नं. ५ श्रीपुरका रामजीवन महतोको छोरा २४ बर्षिय ओमप्रकाश भन्ने दिलिपलाई घरदेखि झण्डै ५ सय मीटर उत्तरमा रहेको औरही खोलामा हत्या गरिएको थियो । उनी त्यहाँ खोलाबाट अवैध रुपमा गिटी बालुवा उत्खनन भइरहेको जानकारी पाएर रोक्न पुगेका थिए । त्यस यता दिनहुँ हत्या बिरोधमा नारा जुलुस र विभिन्न वक्तव्य बाजी हुँदै आएको छ ।